SERASERA, TENY MALAGASY: 20/03/11 - rov@higa
20 Mars 2011, 22:16pm
Tsy hihemotra intsony ny Ankolafy telo
Andro vitsy sisa no andrasana dia hiroso amin’ny dingana efa andrasan’ny vahoaka Malagasy rehetra ny Ankolafy telo. Ny fiverenan’ireo iraka lasa any Afrika Atsimo no andrasana dia hametraka ny paikady farany amin’ny fiovana lehibe eto amin’ny Firenena ireo mpitarika. Efa tamin’ny fiandohan’ny volana Martsa no nampiomanana ny vahoaka ary efa mandeha ny paipaika rehetra nentin’ny any amin’ny fototra hanomanana izany fotoan-dehibe izany.
Araky ny nambaran’ny Pr. Zafy teny amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka dia “tsy hihemotra intsony ny ankolafy telo satria tsy misy fanjakana ara-dalàna izany intsony eto Madagasikara”. Nanambara moa ny lehiben’ny Ankolafy zafy fa nahazo taratasy avy any amin’I Camille Vital ihany koa, toy ny ankolafy RAVALOMANANA, taratasy izay mangataka ny ankolafy tsirairay mba hanome anarana hatolotra ho Minisitra ao amin’ny governemanta izay haorin’ny HAT. “Fantatr’izy ireo fa tsy hahazo ny fankatovana avy amin’izao tontolo izao mihitsy izy raha tsy misy ny ankolafy telo” araky ny nambaran’ny Pr. Zafy “ka izay no mahatonga azy manambitamby toy izany”.
Rahampitso no tafaverina an-tanindrazana ny iraky ny ankolafy telo nalefa hifanakalo-hevitra tamin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny TROIKA. Raha ny tatitra voarain’ireo mpitari-tolona eto an-tanindrazana dia nizotra mankany amin’ny fandresen’ny tolom-bahoaka ny fifanakalozana. Hanao tatitra amin’ny vahoaka avy hatrany moa izy ireo amin’ny Alatsinainy hoavy izao. Marihina fa nahitana solontena avy amin’ny ankolafy Ratsiraka, Zafy ary RAVALOMANANA ireto iraka nalefa tany amin’ny SADC sy ny TROIKA ireto.
Matokisa fa miara-dia aminareo hatramin’ny farany aho hoy Pr Zafy Albert !
Tonga nitarika ny tolona teo amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka tamin’ity androany Sabotsy 19 Martsa 2011 ity ny Profesora Zafy Albert.Notronon’ireo mpikamba ao amin’ny ankolafy telo nahitana an’i Manandafy Rakotonirina avy amin’ny ankolafy Ravalomanana, Prince Elakovelo avy amin’ny ankolafy Ratsiraka, sns…namaly ny antso ihany koa ny vahoaka maro be tonga teo an-toerana.
Ny vahoaka Malagasy rehetra no tonga mitolona eto fa tsy ny ankolafy telo irery hoy ny filoha Zafy, matokisa fa miara-dia aminareo hatrany ny tenako hatramin’ny farany hoy izy.Mbola nanamafy ihany ity raiben’ny demokrasia ity fa lany daty ny fitondrana FAT, tsy misy fitondrana FAT izany intsony eto hoy izy, tsy misy ny « chef suprême des armées izany, tsy misy ny President suprême de la justice », banga izany toerana rehetra izany hoy ny filoha Zafy koa « afaka manangana fanjakana izay té hanagana » fa tsy izy intsony ny FAT.
Nanambara ihany koa ny « prof » fa nahazo taratasy avy amin »i Vital izay mangataka anarana avy aty aminy ankolafy ho ao anatin’ny governemanta vaovao, fantatr’izy ireo fa tsy misy fanjakana mijoro ara-dalàna eto koa dia mipetraka ary miandry ny fananganana governemanta tena izy no mety amin’i Andry Rajoelina hoy ihany ny tenany. »Tsy hihemotra mihitsy isika, fa hotohizana hatramin’ny farany ny tolona ». Nilaza ihany koa izy fa hivoaka ho azy ny gadra politika rehetra satria ireo miaramila nametraka azy ireo teo amin’ny fitondrana no gadragadraina fahatany. Nampatsiahy ihany koa izy, momba ilay « sambo be » nolazain’i Andy Rajoelina, « aiza izay sambo mandeha eo? » hoy izy, sambo feno voalavo io tangainan-dry zareo io.
Nifanao fotoana indray moa ireto mpitolona ireto fa ho avy maro be amin’ny Alatsinainy ho avy izao hihaino ny tatitra entin’ny solon-tenan’ny ankolafy telo avy nidinika tany Afrika momba ny famahana ny krizy eto Dago.
BasyVava TV - Vaovao Tapatapany
Monja Roindefo milaza fa tsy misy fanjakana ara-dalana eto
Nandritra ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety no nilazany izany; ary nanambarany fa efa tapitra ny fe-potoana nomena ity fanjakana ity. Namafisiny koa fa maro ny lainga sy fitaka tao anatin’izany fitantanana izany, indrindra ny filazana fa manaiky ny sori-dalan’I Simao ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Hanao fitsidihana any ivelany izy ato ho ato: Afrika atsimo, Namibie, …
Governemanta vaovao: ho fantatra atsy ho atsy
Maro dia maro tokoa ireo nametraka ny antontan-taratasy momba azy ny teny Mahazoarivo, toy ny antoko politika UDR, TGV, RPSD… izay fantatra fa toa antoko akaiky ny fitondrana ihany. Hatreto anefa aloha dia mbola tsy fantatra na ho firy na ho firy indray ireo omena sezana Ministra.
Fa iza i Brian Currin?
Fantatra izao fa mpanolotsaina manokan’Atoa Ravalomana ity vahiny ity fa tsy mpisolovava azy akory, araka ny feo heno etsy sy eroa. Tsikaritra matetika tokoa mantsy izy nandritra ireny fifampiresahana tamin’Atoa Chissano ireny. Ary nanamafy fa manolotsaina eo amin’ny lafin’ny lalàna ihany no andraikiny.
SRDI : mety hikatona ny seranam-piaramanidina ?
Nahaton’ny fitondrana FAT ny fifanaraham-piaraha miasa tamin’ny SRDI; orinasa tokony handrindra sy hitantana ny fahandriam-pahalemana eny amin’ny habakabaka sy ny seranam-piaramanidina Malagasy. Nampanantsoin’ny fikambanambe eoropena ny tompon’andraikitra Malagasy saingy tsy mbola misy ny valiny mazava momba io raharaha io. Raha tsy misy tokoa mantsy ny fiarovana ny seranana sy ny mpandeha dia azo atao ny manakatona izany.
Manandafy:” Aza mieritreritra ny handripaka anay”
Nampitandrina ny fitondrana FAT izy nandritra ny lahateniny teny amin’ny Magro Behoririka. Tsy ny fanenjehana ny ankolafy telo no vahaolana fa ny fifampiresahan’ireo lehiben’ny ankolafy eto Antananarivo. Nanambara koa izy fa vonona ny handray ny toeran’ny mpiray ministra raha ilaina izany.
Mamy Rakotoarivelo: Sahirana ny frantsay
Hotazomina 15 andro eny amin'ny BC Anosy Atoa Rakotoarivelo noho ilay raharaha fanampoahana baomba teny amin'ny Marais Massay. Nilaza ny fanahiany ary ny mpitondra tenin'ny raharaham-bahiny frantsay Atoa Valéro, noho io "garde à vue" io. Misavoritaka tokoa mantsy raha ny resaka "procédure" momba io raharaha io.
Fiainam-pirenena : Misy olom-pirenena hafakely ?
Mandeha ny resaka an-jorony hatrizay fa tato ho ato dia vaky bantsilana hatrany imasom-bahoaka na dia natao resaka tsy loabody aza hoy ny fitenin-jatovo sy fiteny mivantambatana. Misy olo-malaza izay tsy ho tenina eto ny anarany izay nosazian'ny Fitsarana Malagasy. Ary nihaiky ny heloa vitany izy matoa miandrandra ny "amnistie". Asa moa na nangataka ny famerenana ny fitsarana mikasika azy izy na tsia fa ny hita maso aloha dia miandrandra mafy izao "amnistie" izao izy sy ireo mpanao pôlitika hafa izay voaheloka tamin'ny fotoan'androny.
Ny tena mampitolagaga ny sarababem-bahoaka dia ny fahasahian'ireto nosazian'ny Fitsarana mbola mahasahy miseho amin'ny fahitalavitra matetika. Ny iray na roa amin' ireo aza moa dia nifidy mihitsy tamin'ny fitsapan-kevibahoaka farany teo. Ary dia noraisin'ny filohan'ny Fahefana avon'ny tetezamita mihitsy. Toa tsy tahotra, tsy henatra fa dia mbola teny Ambohitsorohitra. Ny iray amin'izy ireo moa dia isan'ny mpifaninana mihitsy ho lehiben'ny governemanta ary efa nanambara fa hilatsaka ho filohan'ny Repoblika amin' ny fifidianana.
Ny tsy mazava mihitsy amin'ny trangan-javatra tahaka izao dia ny pitsopitson'ny paikady ao amin'ny Fitsarana. Azo inoana ve fa efa madio ny "casier judiciaire" n'ireny mpanao pôlitika miseho vahoaka sy miaka-dapa ireny ? Tokony hazava ny resaka satria ny firesahana izany any rehetra any dia mahatsapa ny maro fa misy zavatra mitongilana ary mahatonga azy ireo hanontany hoe misy olom-pirenena karazany firy marina eto fa toa hafahafa.
Ao moa ny mamadika ny resaka ho resaka tsy fitiavana na mankany amin'ny resaka fihaviana saingy ny fitoviana eo ambanin'ny lalàna ve misy resaka fihaviana ? Samy Malagasy iray ihany ary samy mitovy eo ambanin'ny lalàna Repob-likana isika fa tsy amin'ny fanjakan'andriana intsony izao.
FAT: Nampitandrina i Manandafy
Nahitsy ny lahatenin’i Manandafy Rakotonirina ho an’ny Fat tao amin’ny Magro Behoririka, omaly. « Aza mihevitra ny handripaka anay amin’ny alalan’ny fisamborana sy ny fanagadrana… Efa niainana teto ny « Raharaha Bani », tsy nisy basy nipoaka. Ny « Raharaha Fign » nahafaty olona… Dieny tsy mbola maro ny maty, aleo mifampiresaka eto Antananarivo ny lehiben’ny ankolafy efatra sy ny hafa », hoy izy sady nampitaha ny zava-misy eto amintsika, manoloana ny mihatra amin’i Kadhafi nandripaka sy nisambotra ireo nanohitra azy ary hotafihin’ny iraisam-pirenena. Notsiahiviny avy eo ny ho votoatin’io fivoriana an-tampony hatao tsy ho ela io. Anisan’izany ny hanendrena ny ho Filohan’ny tetezamita. Ny hanoloana ireo mpikambana amin’ny Kongresy (Ct) sy ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita (Cst). « Horaisintsika ny toeran’ny Praiminisitra raha averina eo ny tenanay », hoy ity Praiminisitra farany tamin’ny fitondrana Ravalomanana ity.
Ho fanatsarana ny fiaraha-miasa: Nifampitsikera ny zandary sy ny polisy
Na ny Jeneraly Ravalomanana na ny Tale Jeneralin'ny polisim-pirenena moa dia samy nanambara fa tsy misy olana ny fiaraha-miasa eo amin'ny zandary sy polisy.
Samy tsy nifampihafahafa mihitsy ireo zandary sy polisy fa samy nitsikera ny zavatra tsy mety ataon'ny andaniny sy ny ankilany nandritra ny atrikasa notanterahin'izy ireo tetsy amin'ny Madahotel 67ha omaly. Anisan'ny nivohitra tamin'izany ohatra ny nambaran'ny Jeneraly Ravalomanana ny amin'ny fitsabahana any amin'ny faritra tsy iandraiketana kanefa tsy mampandre ny tompon-toerana akory. Ny polisy koa tetsy andaniny nilaza ny amin'ny fifanitsahana eo amin'ny asa toy ny hoe mahatratra zavatra ry zareo dia misy ny tsy maintsy alefa any amin'ny zandary. Samy niaiky ny fisian'ny lesoka avokoa izy ireo noho izany ka tapaka fa tsy maintsy mifampiteny foana rehefa any amin'ny toerana tsy an'ny tena ary tokony tsy ho sakana ihany koa ny olona manao fanadihadiana raha izy no mahatratra azy.
Fantatra nandritra io atrikasa io fa hisy ny fifanaraham-piaraha-miasa hatao hiarahan'ny zandary sy polisy ka ny 25 martsa ho avy izao no voalaza fa hanasoniavana izany. Na ny Jeneraly Ravalomanana na ny Tale Jeneralin'ny polisim-pirenena moa dia samy nanambara fa tsy misy olana ny fiaraha-miasa eo amin'ny zandary sy polisy. Tomponandraikitra maro eo anivon'ny zandary sy polisy no tonga tao an-toerana ary anisan'ny nanatrika izany ihany koa ny Lehiben'ny Fampanoavana sy ny Lehiben'ny Faritra Analamanga. Ny Lehiben'ny Fampanoavana izay nilaza ihany koa nandritra ny fandraisam-pitenenany fa matetika no mifampiahiahy ny zandary sy polisy rehefa misy raharaha mitranga ka tsy mifampilaza. Ny tanjona amin'izao moa raha ny voalaza dia hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana ka antenaina fa mba hisy vokany any amin'ny vahoaka tokoa izany.
Monja Roindefo sy ny Antoko Monima: «Tsy miray petsapetsa amin’ny soridalan’i Simao izahay »
«Noho ny famafazana lainga eo amin’ny fomba itondrana ny tany sy ny fanjakana ankehitriny, hijoro ny antoko Monima sy ny vondrona politika UAMAD hanohitra izay tsy mety rehetra eto amin’ny firenena » hoy Atoa Monja Roindefo tamin’ny alalan’ny fanambarana miezinezina nataony, nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety tetsy Antsakaviro omaly. Mikasika ny fivoaran’ny toe-draharaha politika eto amin’ny firenena, nilaza ity Praiminisitra teo aloha ity fa « tsy miray petsapetsa amin’ny soridalana novolavolain’ny Dr Leonardo Simao izahay ». Ny anton’izany araka ny fanambarany ihany, dia noho ny tsy fisian’ny soridalana mazava izay miteraka tsy fitoniana ara-politika eto amin’ny firenena.
Etsy andanin’izany, nitondran’Atoa Monja Roindefo fanazavana manokana, ny mikasika ny heveriny fa lalana hivoahana amin’izao krizy izao. « Amin’ny maha antoko goavana sy efa ela nietezana ny MONIMA, dia hisy ny fampiasana ny fifandraisana ara-pitolomana amin’ireo antoko mitovy firehana aminy eo anivon’ny SADC toy ny ANC, MPLA, SWAPO ary ny FRELIMO » hoy izy. Ho fanatanterahana izany, hanao fitsidihana ireo firenena vitsivitsy eo anivon’ny SADC ny tenany atsy ho atsy. Eo ihany koa ny fanohizana ny fampidinihana amin’ireo ankolafin-kery hafa.